कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज भाद्र १ गते सोमबारको रा’शिफल ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज भाद्र १ गते सोमबारको रा’शिफल !
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज भाद्र १ गते सोमबारको रा’शिफल !
काममा अप्र’त्यासित बाधा ब्याबधान आईलाग्ने तथा ठुलो श्रम खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ ख्याल गर्नुहोला । समयको र कामको तालमेल नमिल्दा कामहरु समयमा सकाउँन मुस्किल पर्नेछ ।अध्ययन अध्यापनमा खासै मन नजाने हुँदा पढाई लेखाईमा अरु भन्दा पछि परिनेछ । बौद्धिक ब्यात्तित्व तथा अग्रजहरुसँग सैद्धान्तिक मतभेद रहनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले पिरोल्नेछ।
साथीले नै श्रीमति उडायो भन्दै रुदै मिडियामा,दुई दिन राखेर फर्काईदिएको श्रीमति हराइन-भिडियो हेर्नुहोस
कारोनाले लियो ३९ वर्षीय युवकको ज्यान, कस्तो थियो स्वास्थ्य अवस्था ?